भक्तपुर छिर्ने नाकामा मान्छे र सवारी साधनलाई छर्किन थालियो स्यानिटाइजर (फोटोफिचर) Canada Nepal
भारतीय विदेश सचिवपछि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण- संयोग मात्रै कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ६ करोड नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु भए ?
कोरोना संक्रमणबाट सप्तरीका एक पुरुषको ज्यान गयो
नगरप्रमुखलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि तीन दिन सेवा प्रवाह बन्द
च्याम्पियन्स लिग : नेयमारको गोलले पीएसजीको जित
च्याम्पियन्स लिग : बार्सिलोनाको फराकिलो जित
भक्तपुर छिर्ने नाकामा मान्छे र सवारी साधनलाई छर्किन थालियो स्यानिटाइजर (फोटोफिचर)
बैशाख ५ २०७७
काठमाडौं । संसारभरमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोनाभाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण फैलिन नदिन विभिन्न उपाय अपनाइँदैछ । २५ दिनदेखि मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ । लकडाउनकै अवस्थामा केहीलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिएपछि थप कडाइ र सतर्कता अपनाइएको छ । यसैक्रममा भक्तपुर छिर्ने सवारी साधन र मानिसलाई स्यानिटाइजर छर्किन थालिएको छ ।
कोटेश्वर हुँदै भक्तपुर छिर्ने बेलामा मनोहराको पुलनिर सुरक्षाकर्मीको सहायतामा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा भक्तपुरले स्यानिटाइजर छर्किने व्यवस्था गरेको हो । रेडक्रस भक्तपुरले मोटरसाइकल र त्यसमा सवार यात्रुलाई स्यानिटाइजर छर्किन थालेको हो ।
बैशाख ५, २०७७ शुक्रवार १३:४५:०० बजे : प्रकाशित
किसानहरूलाई सयपत्री फुल टिप्न चटारो (फोटोफिचर)
काठमाडौं । हिन्दुहरूको दोस्रो महान चाड तिहार आजदेखी शुरु भएको छ । तिहार शुरु भए लगत्तै बजारमा किनमेलको लागि मानिसहरुको भीड जम्मा हुन थालेको छ ।
बजारमा नेपालमै फुलेका फूलहरु आइसकेका छन् । यसैबीच तिहार नजिकिदै गर्दा बजारमा पठाउन काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका ईचङ्गुका किसानहरूले सयपत्री टिपि सकेका छन् । तस्बीर - रोशन सापकोटा
कार्तिक २७, २०७७ बिहिवार ११:५१:५७ बजे : प्रकाशित
कोरोना बढेको बढ्यै, घटेन बजारको भीडभाड (फोटोफिचर)
काठमाडौं काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाभाइरस संक्रमण घट्न सकेको छैन । सरकारले बारम्बार अनावश्यक भीडभाड नगर्न आग्रह गरिहँदा पनि बजारलगायतका सार्वजनिक स्थानमा मानिसहरुको घुइँचो देखिन्छ ।
मुलुकभरको कुल संक्रमितमध्ये ६० प्रतिशत हाराहारीमा काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित भेटिएका छन् । मंगलबार मुलुकभर ३५५६ संक्रमित भेटिँदा काठमाडौं उपत्यकाका २१२९ जना रहेका थिए ।
यस्तै सोमबार मुलुकभर ४०४७ संक्रमित भेटिँदा काठमाडौं उपत्यकाका २२८३ र शनिबार मुकभर २०७१ संक्रमित भेटिँदा काठमाडौं उपत्यकाका १४१६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
यसरी काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण बढिरहँदा वा दुई हजारको हाराहारीमा संक्रमित भेटिँदा बजारसहित सार्वजनिक स्थानमा मानिसको भीड कम हुन सकेको छैन ।
दशैँसहित चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा भीड लागेको छ, जसले कोरोना संक्रमण बढाउने देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उनले भीडभाड नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, न्यूरोड, अशनसहित व्यापारिक र बजार क्षेत्रमा मानिसको भीड लागेको देखिन्छ ।
आश्विन २७, २०७७ मंगलवार १७:४२:०० बजे : प्रकाशित
बोल्ड केकी अधिकारी (फोटोफिचर)
अभिनेत्री केकी अधिकारीले आफ्नो अभिनय क्षमता र बौद्धिकताले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राम्रो छाप छाडीरहेकी छिन्। चलचित्रमा लगातार अभिनय गरिरहेकी नायिका आधिकारी लकडाउन भन्दा अगाडी 'परेदेशी २' चलचित्रको छायाकनमा व्यस्त रहेकी थिइन्।
'झिङ्गे दाउ' उनले छायाकन सकेर बसेको चलचित्र हो। नेपालको पहिलो कमेडी रियालिटी शो 'कमेडी च्याम्पियन' को कार्यकारी निर्माता हुन् केकी।
केकी प्रस्तुतकर्ता रहेर चलचित्र 'कोहोलपुर एक्सप्रेस' को निर्माण समेत गरिसकेकी छिन्। उनि र उनको टिम यतिबेला कमेडी च्याम्पियनको दोश्रो सिजनको तयारीमा रहेका छन्।
आश्विन ११, २०७७ आइतवार १८:०८:५७ बजे : प्रकाशित
कति सुहायो पल र एलिजाको जोडी (फोटो र भिडियो)
अभिनेता पल शाह र अभिनेत्री एलिजा गौतम पछिल्लो समय लगातार दुई म्युजिक भिडियोमा साथ देखिएका छन्। केहि दिन अगाडी 'आटो पिठो' बोलको गीतमा देखिएको यो जोडी अहिले नया गीत ' धान कुट्ने ढिकी' मा देखिएको छ। दर्शकले दुवै गीतको भिडियोमा पल र एलिजाको जोडीको तारिफ गरेका छन्।
दर्शकको माया पाएको यो जोडी एक अर्काको तारिफ गर्न पछि पर्दैनन् । पल एलिजालाई काममा अति नै मिहेनत गर्ने कलाकारको रुपमा लिन्छन् भने एलिजाको नजरमा पल अहिलेको स्टार कलाकारको रुपमा रहेका छन् ।
दुवैले चलचित्रमा साथ काम गर्ने चर्चा चले पनि समय नमिलेको कारण काम गर्न नसकेको बताउछन्।
भाद्र २०, २०७७ शनिवार ००:११:०९ बजे : प्रकाशित
# एलिजा गौतम
अस्मिता अधिकारीसंग सांगीतिक र व्यक्तिगत गफ (फोटो र भिडियो)
नेपाल आइडलको दोश्रो सिजनबाट चर्चामा आएकी गायिका हुन् , अस्मिता अधिकारी। नर्सिङ्ग पढेर त्यसमै व्यस्त रहेकी अस्मिताको गायनको सोख भने पहिलेबाट नै रहेको बताउछिन्। नेपाल आइडलको दोश्रो सिजनमा चौथो बनेकी अस्मिता अहिलेको व्यस्त गायिका मध्येमा एक हुन्।
लगातार सफल गीतमा आफ्नो आवाज भरिरहेकी अस्मिताले आफ्नो आवाजको कारण नै बजारमा बलियो पकड जमाइरहेकि छिन्।
'आखामै बसाउ मलाइ', माया गरौला , रुमालै चिनो , तिम्रो घरको वरिपरि , रातो टिका निधारमा लगायतका दर्जनौ गीतमा उनले आवाज भरेकी छिन्।
श्रावण ३२, २०७७ आइतवार १८:१९:३५ बजे : प्रकाशित
भिन्न मुड- भिन्न स्टाइलमा नाजिर (फोटो फिचर)
रंगमंच हुदै चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अभिनेता नाजिर हुसैनले आफ्नो अभिनय क्षमताका कारण नै आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन सफल भैसकेका छन्। सेकेन्ड लिड अभिनेताको रुपमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति जनाएका नाजिर पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा पनि निकै व्यस्त रहेका छन्।
सफल म्युजिक भिडियोमा देखिदै आएका नाजिर अभिनित पछिल्लो भिडियो 'डुप्लिकेट माया' ले पनि राम्रो सफलता हासिल गरिरहेको छ। 'होस्टेल रिटन्स , वीर विक्रम , 'वीर विक्रम २' , 'जंगे' लगायतका चलचित्रमा नाजिरले अभिनय गरेका छन्।
श्रावण २८, २०७७ बुधवार २२:५१:१९ बजे : प्रकाशित